Fanaraha-maso ny fifidianana : Tsy atokisana ny tatitra -
AccueilSongandinaFanaraha-maso ny fifidianana : Tsy atokisana ny tatitra
Fanaraha-maso ny fifidianana : Tsy atokisana ny tatitra
Biraom-pifidianana 9305 amin’ ireo 24 852 no ananan’ny ivon-toerana SAFIDY avy amin’ny alalan’ny fiarahamonim-pirenena Rohy mpanara-maso ny fifidianana, izany hoe distrika 34 amin’ireo 119, ary faritra 7 amin’ ireo 22. Ambaran’ny ivon-toerana SAFIDY fa ny antontan-kevitra sy ny valin’ny fikarohana ary ny fanadihadiana vitan’izy ireo mandritra ny fifidianana dia ifampizarana amin’ireo rafi-panjakana isan-karazany mandrindra sy misahana ny fifidianana toa ny CENI, HCC, BIANCO. Ny fanontaniana mipetraka anefa eto dia ny hoe, ahoana no hinoana ny valin’ny fanadihadiana sy ny firaketana an-tsoratra ataon’ ny ivon-toerana raha vitsy ireo mpanara-maso ampiasain’izy ireo. Hiaraha-mahalala tsara fa fifidianana manerana an’i Madagasikara no tanterahina eto fa tsy fifidianana amin’ireo distrika 34 ihany. Ny antontan’isa izay hivoaka dia hampiasaina manerana an’i Madagasikara, ka sarotra ny hahatoky ireo antontan’isa vitsy ireo.
Ambaran’ny fampitam-baovaon’ny ivon-toerana SAFIDY, fa mpilatsaka an-tsitrapo avokoa ireo hanatanteraka ny asa. Ka raha tsy handray karama ireo 9305 mianadahy avy ireo, dia azo hinoana kosa fa hahazo solon-tsakafo. Izany hoe raha omena dimy arivo Ariary isan’olona ho solon-tsakafo ny SAFIDY, dia mitentina 232 625 000 Ariary izany ny vola mivoaka amin’ io fiarahamonim-pirenena io. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe, avy aiza izany ireo vola ireo sa mbola hotadiavina. Ny mpanohana vahiny hiaraha-mahalala fa tsy miantoka sakafo sy karama ihany koa. Mbola hitady vola ve izany ny SAFIDY, sa dia efa am-pelatanan’izy ireo ny vola. Ny fotoana tahaka izao mantsy dia azo lazaina fa mandeha ny tsena. Tsy ho an’ireo mpanao T-sheert ihany, fa eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena.